University of Bordeaux - Education in Frantsa. Fianarana any Eoropa
Créé : 1441
mpianatra (eo ho eo.) : 53000
Aza adino ny midinika University of Bordeaux
Misoratra anarana ao amin'ny University of Bordeaux
Laharana teo an-tampon'ny anjerimanontolo ao Frantsa, ny Oniversiten'i Bordeaux dia nalaza noho ny hatsaran'ny ny fianarana ambony sy ny fikarohana taranja.
Ny University of Bordeaux tolotra 245 fandaharam-pianarana mitarika ho pirenena diplaoma, voalamina manodidina ny efatra lehibe ara-tsiansa saha:
Siansa sy Teknolojia
lalàna, Political Science, Toe-karena, Management
Fiainana sy Health Siansa
Siansa ara-tsosialy sy ny Human
Misy isan-karazany be dia azo atao ao anatin'izany ny fepetra takina: 180 tompony specialties, 115 -pirenena diplaoma in fahasalamana, nasionaly diplaoma amin'ny oenology…
eo ho eo 13% ny mpianatra tao amin'ny Anjerimanontolon'i Bordeaux dia iraisam-pirenena. Ny anjerimanontolo efa lasa isan-karazany ny fandaharana fanadihadiana iraisam-pirenena fa dia ampianarina amin'ny teny anglisy (na ny fiteny hafa toy ny Espaniola) ary ny tolotra ireo mpianatra ny mety vita mpiray na roa degre.
Over 40 iraisam-pirenena misy ao amin'ny fandaharana fianarana Bachelor, Mpampianatra sy Doctorat ambaratonga ao anatin'izany 11 EU-misy soratra hoe fandaharan'asa. Ny Oniversiten'i Bordeaux no voalohany oniversite tany Frantsa ny fandraisana anjara ao amin'ny Erasmus Mundus Program.
Ny anjerimanontolo mampiasa manodidina 5,600 mpiasa, izay efa ho 3,000 dia akademika sy ny fikarohana mpiasa. Izy ireo dia fantatra ho ny kalitaon'ny ny siansa sy ny fampianarana fepetra. Izy ataon'izy rehetra doctorates na PhD diplaoma sy ny mpampianatra ara-pahasalamana rehetra hopitaly mpanao mavitrika ao amin'ny University Bordeaux Hospital.
College ny Lalàna, Political Science, Toekarena sy ny Management
College ny Fahasalamana Sciences
College ny Human Sciences
College ny Science & teknolojia =
Departemantan'ny Siansa sy ny Teknolojia
Departemantan'ny Fiainana sy Health Siansa
Sampan-draharaha Sosialy sy ny Human Siansa
1441: Ny University of Bordeaux no namorona ny Papa Eugene IV ary izany dia ahitana ny efatra lehibe mandingana – zavakanto, fanafody, ny lalàna sy ny teolojia.
1793: Rehetra ny anjerimanontolo ao Frantsa, anisan'izany ny University of Bordeaux, dia nofoanana ny frantsay revolisionera.
1808: Napoléon Bonaparte reorganizes ny oniversite ho telo misaina izay mifantoka amin'ny teolojia, zavakanto sy ny siansa.
1896: Ny oniversite any Frantsa dia averina alamina araka ny lalàna vaovao. Ny University of Bordeaux dia indray-miorina amin'ny ny toetsaina ny kanto, siansa, lalàna, fanafody sy ny levitra.
1950S – faramparan'ny taona 1960: Ny isan'ny mpianatra voasoratra anarana mandroso avy 8,000 ny 25,000.
1960S: Ny tsy mitsaha-mitombo anjerimanontolo dia mivelatra ny toerana ho any amin'ny Campus Talence-Pessac-Gradignan.
1966: Alfred Kastler, Mpampianatra fizika ao amin'ny Oniversiten'i Bordeaux, dia nahazo ny Loka Nobel ho an'ny Fizika.
1968: Ny University of Bordeaux dia nizara ho telo misaraka anjerimanontolo – Bordeaux 1 (lalàna, Toe-karena, siansa), Bordeaux 2 (fiainana, ara-tsosialy sy ara-pahasalamana siansa), Bordeaux 3 Michel de Montaigne (zavakanto sy ny siansa olombelona).
1995: University Bordeaux 1 lasa roa samy anjerimanontolo. Bordeaux 1 manolotra ny akademika saha ny siansa sy ny teknolojia, ary Bordeaux IV Montesquieu manome lalàna, ara-tsosialy sy ara-politika siansa, toe-karena sy ny fitantanana.
1997: Ny University of Bordeaux "Pole" noforonina, regrouping efatra oniversite miavaka fikambanana.
2004: Ny filoham-pirenena ao amin'ny anjerimanontolo efatra sonia ny nanorina Sata ny iraisana University of Bordeaux.
2007: Ny fikarohana sy ny fampianarana ambony tsato-kazo ao amin'ny Oniversiten'i Bordeaux noforonina izay incorporates ny fianarana ambony toeram-pampianarana sy sekoly ny tranokala (Bordeaux University 1, Bordeaux Segalen University, Michel de Montaigne Bordeaux 3, Université Montesquieu Bordeaux IV, Institut Polytechnique de Bordeaux, Bordeaux Sciences fanatsarana ny taha, Sciences Po Bordeaux).
2010: Bordeaux 1, Bordeaux Segalen sy Bordeaux IV Montesquieu sonia fifanarahana tetikasa iraisana stratejika toy izany fandefasana ny dingana amin'ny famoronana tsy manam-paharoa fananganana, vaovao "University of Bordeaux".
1St Janoary 2014: Izay indrindra 573 taona taorian'ny nanorenana ny daty, ny vaovao University of Bordeaux dia indray-miorina.
Ianao ve mila midinika University of Bordeaux ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
University of Bordeaux tamin'ny Map
Photos: University of Bordeaux ofisialy Facebook
University of Bordeaux Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Bordeaux.